भागरथी आमालाई भेटेपछि भक्कानिए रबि लामिछाने | बाहिरीयो कारुणि भिडियो, दोषीलाई नछोड्ने Rabi Baitadi | Public 24Khabar
Home News भागरथी आमालाई भेटेपछि भक्कानिए रबि लामिछाने | बाहिरीयो कारुणि भिडियो, दोषीलाई नछोड्ने...
सहरसँग प्रश्नहरूको पुलिन्दा ठूलो छ । असन्तुष्टिको आयतन दिनानुदिन बढ्दो छ । तर ती सब असन्तुष्टिको जवाफ खोज्न पनि त गर्नुपर्ने भनेकै विरोध होइन र ? संविधानको पूरै पाना पल्टिन पनि नभ्याईकन भएको संविधानको उल्लंघनमा सचेत नागरिक स्तरबाट गरिनुपर्ने त विरोध नै त हो । नागरिकले राज्यप्रति असन्तुष्टि पोख्ने माध्यम भनेकै जुलुस र आन्दोलन हो । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै वाक्–स्वतन्त्रता हो । जहाँ हामी प्रश्न गर्न पाउँछौं, विरोध गर्न पाउँछौं । जब प्रश्न गर्न बन्देज हुन्छ, जब विरोधका आवाज दबाइन्छ तब तानाशाहको जन्म हुन्छ । तानाशाहको जन्मले देश र समाजलाई कता लैजान्छ त्यसका थुप्रै उदाहरण इतिहास पढे थाहा पाइन्छ । विरोध नगरिएको भए गुठी विधेयकमा लालमोहर लागिसक्ने थियो । विरोध नगरिएको भए रानीपोखरीले वर्तमान रूप कहिल्यै पाउने थिएन । विरोध र आवाज नउठाएको भए सायद राणाशासन ढल्ने थिएन ।
Previous articleभर्खरै हेर्नुहोस्, सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय, सर्वोच्चमा बहस चलिरहेकै बेला यस्तो घोषणा PM KP Oli.
Next articleलाहुरे लाहुरेनीलाई छुटाउन ईण्डियन मिडिया सक्रिय, चरि त्र ह* त्या गर्न खोजेपछि Live मा आए सन्तोष